Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo la kulmay Guddiga Madaxa Banaan ee Doorashooyinka Qaranka – WARSOOR
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo la kulmay Guddiga Madaxa Banaan ee Doorashooyinka Qaranka
Muqdisho (warsoor) Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa la kulmay guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka Qaranka.
Guddiga ayaa ka warbixiyay waxyaabihii u qabsoomay mudadii afarta bil ahayd ee la soo dhaafay iyo waxyaabaha u qorsheysan bilaha soo socda.
Sidoo kale guddiga ayaa sharaxaad ka bixiyay istaraatiijiyada ay u diyaariyeen doorashada iyo kulamada wadatashi oo ay wadaan.
Guddoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka Qaranka Marwo Xaliimo Ismaaciil Ibraahim ( Xaliimo Yareey ) ayaa sheegtay in ay si wanaagsan shaqooyinkooda ugu socdaan.
” Guddigeena howlo wanaagsan oo muhiim u ah dalka ayuu wadaa, Xisbiyada diiwaan gelintooda meel wanaagsan ayay noo mareysaa, waxaa sameysanay xafiisyo cusub si shaqooyinkeena an usii hormarino” ayay tiri Marwo Xaliimo yareey.
” Guddoomiye waxan kaa rajeyneynaa inad si hagar la’aan ah noola shaqeyn doonto, howlaha noo harsan hadaan nala garab istaagin maku guuleysan karno” ayay mar kale tiri Marwo Xaliimo yareey.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan oo kulanka hadal ka jeediyay ayaa amaanay shaqooyinka ay wadaan guddiga.
Guddoomiyaha ayaa kula dardaarmay guddiga iney sii laba jibaaraan dadaalka ay wadaan.
” Xaqiiqdii shaqooyin wanaagsan ayaa heysaan, waxaan idiin balan qaadaya inan si hufan idiinla shaqeyn doono, wax walbo oo aad xafiiskeyga ugu baahataan waa diyaar” ayuu yiri guddoomiyaha Golaha Shacabka.
Ciidamada Ammaanka Puntland oo ka hortagay weerar ay ku soo qaadeen Maleeshiyada Shabaab
R/wasaare ku-xigeenka Soomaaliya iyo Duqa Muqdisho oo si wadjir ah u Daah furay Wajiga labaad ee mashruuca Nadaafada casriga ah ee G/Banaadir